Wararka - Resistance Band Home Workout
Jimicsiga Guriga ee Resistance Band
Xiliga hargabka iyo covid-19 aad u soo badanaya hadda, meelo badan oo jimicsi ayaa si ku meel gaar ah mar kale u xidhaya.Tababarkan waxaa lagu samayn karaa guriga wuxuuna u baahan yahay oo kaliya koox iska caabin ah oo furan.
Bandhigyadu waxay ku yimaadaan ballacyo kala duwan.Inta uu balaadhku sii balaadhiyo ayaa iska caabintiisu sii badanaysaa wayna adkaanaysaa in la isticmaalo.Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iibsato kooxo kala duwan si aad horumar u gaadho markaad sii xoogaysanayso.
Isticmaalka xargaha ayaa dareemi kara wax yar oo la yaab leh markaad bilaabayso.Furaha ayaa ah inaad hubiso inaad xakamayso xiisadda iyo xawaaraha dhaqdhaqaaqaaga si aadan u xirin xargaha dhamaadka wakiil kasta.
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ay ku jiraan kooxo iska caabin ah oo qayb ka ah wareeggaaga jimicsiga caadiga ah.Waxay kaa caawinayaan inaad dhisto xoog, wanaajiso dhaqdhaqaaqa waxayna qoraan murqahaaga xasilinta si ay kaaga caawiyaan inaad dhisto xoogga asaasiga ah oo ay weheliso kooxda muruqa aasaasiga ah ee la shaqeynayo.Waxa kale oo ay ku siinayaan nasasho hal-abuurnimada mishiinnada jimicsiga iyo faa'iidada dheeraadka ah waxay leeyihiin miisaan yar oo la qaadi karo si aad u qaadato haddii aad safraysid.
Jimicsi samee Dejiya Reps Naso
Kululee 1 5 daqiiqo Wadnaha
Safka Fadhiga leh ee Band 4 12 30 ilbiriqsi
Lateral Kor u Qaadida 3 8 dhinac kasta 30 ilbiriqsi
Riix garabka garabka iska caabinta 4 12 30 ilbiriqsi
Bicep Curls oo leh Band 4 15 30 ilbiriqsi
Saf toosan oo leh Band 3 12 30 ilbiriqsi
Is deji 1 5 daqiiqo Wadnaha
Saf fadhiya oo leh koox iska caabin ah
Fadhiiso sagxada lugaha si toos ah hortaada.
Qabashada gacan-iska-caabbinta, dhig xarunta dhexe ee lugahaaga, ka dibna ku duub cidhif kasta gudaha iyo agagaarka cag kasta hal mar oo kale si aad lug kasta wareeg ugu samayso.
Ku fadhiiso meel dheer oo leh cidhiidhiyaal cidhiidhi ah oo hortaada ku qabo gacmaha oo xusullada u laabaan dhinacaaga.
Gacmaha dib u soo jiid ilaa ay dhinacaaga ku xigaan oo xusullada ay kaa dambeeyaan.Si tartiib ah u sii daa.
Lateral Kor u Qaadida
Istaag cagahaaga oo wadajira xagga dambe ee wareegga.
Qabo cidhifyada kooxda, adigoo gacmahaagu si toos ah hoos ugu soo laadlaadsan oo calaacalahaagu is eegayaan.
Jidhkaaga oo meesha ku hay, gacmahaaga si toos ah u taag dhinacyadaaga.
Jooji, ka dibna si tartiib ah ugu soo celi bilawga.
Riix garabka garabka iska caabinta
Qabo cidhifka kale oo soo gaadhsii heerka laabtaada iyadoo calaacasha kor u soo jeedaan.
Si toos ah u dhig oo wax yar kor u eeg.
Kor u riix ilaa suxulladaada ay ka xiran yihiin, ka dibna si tartiib ah ugu soo celi booska bilowga.
Iska caabinta Band Bicep Curls
Istaag labada cagood ee caabbinta caabbinta gacmahaaga oo dheer ee dhinacyadaaga ku xiga calaacalahana hore u soo jeedaan.
Si tartiib ah u laalaab gacmaha ilaa garbaha, adigoo tuujinaya biceps oo ku hay suxullada dhinacyadayada.
Si tartiib ah u sii daa gacmaha ilaa booska bilowga.
Saf toosan oo leh Kooxda iska caabinta
Qabashada gacan-qabsiga bandowga iska caabbinta, dhig bartamaha bandowga cagahaaga hoostooda
Gacantaada kor u soo jiid ilaa ay ku xigaan dhegahaaga oo xusullada ay ka sarreeyaan madaxaaga.Si tartiib ah u sii daa.
Qiimaha Dumbbell, Dumbbell Set, Yoga Mat, Dumbbell la hagaajin karo, Tpe Yoga Mat, Eco Friendly Yoga Mat,